Golaha Danwadaag oo Labo Sano jirsaday. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Golaha Danwadaag oo Labo Sano jirsaday.
Golaha Danwadaag oo Labo Sano jirsaday.
December 3, 2018 - By: Mohamud Nadif
Golaha Danwadaag oo ah gole ka shaqeeya Arimaha samafalka iyo horumarinta Arimaha Bulshada ayaa labo sano jirsaday, Golahaan ayaa la aasaasay sanadkii 2016 2dii bishii December, munaasabd lagu xusayo aasaaska ururkaan sanad guuradiisii 2aad ayaa lagu qabtay magaalada Qardho, waxaana munaasabada kasoo qaybgalay Maamulka Gobolka Karkaar kan degmada Qardho, Taliska qaybgta Gobolka, Madax ka socoto shirkadaha Gobolka Karkaar, Aqoonyahan iyo dhalinyaro.
Golaha ayaa ugu horay soo bandhigay guulihii aya gaareen mudada ay jireen, waxyaabihii ay qabteen iyo qorshayaashooda sanadaha soo socda, waxay sidoo kale soo bandhigeen isbedelada ay dhaliyeen mashaariicdii ay fuliyiin iyo sida ay u dabooleen baahiyo tira badan oo jiray.
Gen Yaasiin Cumar Dheere iyo Saciid Caydaruus oo ka mid ah xubnaha Golaha Danwadaag waxay si isku mid ah u sheegeen in Golahaan uu markasta diyaar u yahay ka shaqaynta arimaha bulshada, waxay kasoo qaybgalayaasha ka codsadeen in loo duceeyo dadkii muxsiniinta ahaa ee mashaariicdaas ka qaybqaatay oo dal iyo dibadba kala jooga.
Dhamaan masuuliyiinta ka socotay Dawlada oo uu ka mid ayahy Gudoomiyaha Gobolka Karkaar Cabdilaahi Maxamed Bare Caato, Taliyaha Qaybta Axmed Yuusuf Jaqanaf waxay sheegen In Dnawadaag waxa ay Gobolka Karkaar iyo guudahaan Puntland ka qabteen ay tahay wax muuqata oo mudan in lagu bogaadiyo laguna daydo.
Martisharaftii kasoo qaybgashay Kulanka oo qaarkood ka hadlay waxay sheegeen in wadiigo wanaagsan ay fureen golaha danwadaagna ay mudan yihiin in lagu abaal mariyo, waxaa si guud laysula qiray kaalinta ay gaysatay dhisida iyo dayactirka ay ku samaysay xarumo waxbarsho oo ku yaala magaalooyinka Isku Shuban, Xaafuun , Dhudhub Iyo Qardho.